एक रक्त थक्का के हो र कसरी खतरनाक छ?
हृदय आक्रमण, स्ट्रोक र हृदय प्रणाली को अन्य रोगहरु - यो सबै अक्सर एउटा तरिका वा घनास्त्रता सम्बन्धित अर्को छ। शरीर को सबै Tissues मा अक्सिजन सञ्चालकको, केही कारणले, यो समस्या हुन सक्छ - रगत भन्ने तथ्यलाई बावजुद। तर मैले के वास्तवमा, रगत एक रक्त थक्का, तपाईं, बुझ्न पर्छ के व्याख्या गर्नु अघि। प्लाज्मा भनिन्छ तरल भाग, यो पारदर्शी छ, र संरचना समुद्र धेरै समान छ। रातो र सेतो र platelets: साथै, रगत विभिन्न corpuscles समावेश गर्दछ। तिनीहरू सबै भिन्न उद्देश्यका छ।
र एक रक्त थक्का के हो? सामान्यतया केही क्षति संग काग को समारोह प्रदर्शन जो यस थक्का-प्लेटलेट प्लेट, कि घाउ "प्लग" छ र यस रक्तस्राव रोक्न। समस्या कहिलेकाहीं भने पनि कुनै वहाँ आक्रान्त, यी थक्के देखा छ।
Thrombus गठन धेरै कारण उत्पन्न गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्यतया डाक्टर द्वारा निर्धारित लागूऔषधको प्रभाव अन्तर्गत हो कि एक पटक धेरै सानो रक्त थक्के गठित चाँडै भंग। तर कहिले काँही तिनीहरू ठूलो थक्का सँगै छडी - र यो, खतरनाक बन्ने छ किनभने यो पोत मा खोल्ने बन्द गर्न सक्छन् प्रमुख अक्सिजन अनिकालबाट पनि पुछ्ने मृत्यु र। र, को पाठ्यक्रम, एक रगत थक्का हृदय, मस्तिष्क वा फोक्सो जहाजहरु मा प्राप्त र मृत्यु सहित अति गम्भीर समस्या, हुन सक्छ। किन जहाजहरु मा रगत थक्के धेरै डाक्टर द्वारा उपचार गर्न धेरै सावधान आवश्यक छ। आखिर, तिनीहरू मात्र अङ्गहरूको पर्खालहरु संलग्न गर्न सकिँदैन र तत्काल खतरा छैन, तर पनि circulatory प्रणालीमा लक्षविना हिड्नु।
घनास्त्रता को घटना, योगदान कारक निम्न समावेश:
लामो समयसम्म शारीरिक निष्क्रियता, ओछ्यानमा आराम ;
संग सञ्चालन सामान्य एनेस्थेसिया ;
ट्यूमर, systemic रोगहरु;
गर्भावस्था र postpartum;
हर्मोन उपचार र estrogensoderzhaschih मौखिक निरोधकों प्राप्त;
लामो समयसम्म स्थिरीकरण, वा कम limbs को पक्षाघात।
नियम, रगत थक्के को उपस्थिति सम्बन्धित रोग रूपमा, रगत clotting पारित गरेर निदान गर्न सकिन्छ। त्यस अवस्थामा, रगत थक्के यदि चाँडै, हामी जोखिम कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। के को लागि एक रक्त थक्का छ? आँखा बंद रक्त को यो ठूलो।
साथै, यस्तै समस्या जन्मजात समस्याका कारण हुन सक्छ hematopoiesis संग। केही clotting कारक को कमी दैनिक जीवनमा सजिलै देखिने नहुन सक्छ, तर उहाँले माथि उल्लेख अवस्थाको एक सँगसँगै छ भने, यो गम्भीर जोखिम, उदाहरणका लागि वृद्धि गर्न सक्छन्, thromboembolism। यस्तो समस्या को अस्तित्व पत्ता लगाउन र आफ्नो उपचार एक haematologist हुन सक्छ बारेमा परामर्श गर्न। साथै, पुरानो मान्छे र जोखिममा भएकाहरूलाई, नियमित र भास्कुलर सर्जन परामर्श गर्न superfluous हुने छैन।
clotting समस्या पहिचान गर्दा मा आवश्यक छ उचित समय विशेषज्ञहरूका सम्बोधन गर्न। हृदयघातबाट, स्ट्रोक, thromboembolism - समस्या को उपचार को कमी को कारण सर्त भएको circulatory सिस्टम को। कि के रगत थक्का छ, र यो कसरी खतरनाक छ।
को हिप मा दुखाइ
खुट्टा ऐंठन को कारण के हो
छोराछोरी, लक्षण र नैदानिक manifestations मा Adenovirus संक्रमण
Myocardial infarction को उपचार
"Maynkraft" प्रकाशस्तम्भ कसरी र यसको लागि के हो?
वैलेन्टिन Yudashkin: एक फेसन डिजाइनर जीवन देखि जीवनी र रोचक तथ्य
Irina Filippova: एक जीवनकालमा को च्याउ अध्ययन
हालै, म धेरै केही सानो मा बाथरूम जाने याद
कति दाँत एक शार्क? गणना हुन सक्दैन
राम विन्डोज7जाँच कसरी म Windows7मा राम जाँच गर्न सक्नुहुन्छ
जहाँ संग्रहकर्ता गनगन गर्न? को उठाउनेहरू र संग्रह गतिविधिहरु मा नयाँ व्यवस्था
मात्र राम्रो बारेमा समीक्षा Interskol